Qatar, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली युवाहरु स्वयं उद्यमी भएर रोजगारदाता बनेका धेरै उदाहरण छन्। विदेशी भूमिमा आफ्नो मेहनत र परिश्रमले दाम सँगसँगै नाम पनि कमाएका नेपाली युवामध्येमा पर्छन् जनकपुरका अब्दुल वासिद। उनी सन् २००४ मा कामको खोजीमा कतार पुगेका थिए। नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्यको रुपमा रहेको कतारमा अब्दुल नेपाली युवा व्यवसायीका रुपमा परिचित छन्।
करिब १५ वर्षअघि रोजगारीका लागि कतार पुगेका उनले सुरुमा निकै संघर्ष गरेको सुनाए। त्यही सङ्घर्षले उनलाई कतारमै व्यवसायी बनायो र सफलता पनि दिलायो। उनीसँगै उनका दुई दाजुभाइ पनि सोही व्यवसायमा सक्रिय छन्। रोजगारीका लागि पुगेका यी तीन भाइ अहिले रोजगार दाता बनेको छन्। उनीहरुले उत्पादन गर्ने ब्रान्डले कतार मात्रै हैन विश्वका अन्य विकसित मुलुकमा पनि प्रशंसनीय बजार लिएको छ।
सुरुदेखि नै व्यवसाय गर्ने मनसाय बनाएका अब्दुल कतारको एक ईलेक्ट्रकल कम्पनिमा काम गर्थे। त्यहाँको अनुभवले उनले आफ्नै ब्राण्डमा सामान उत्पादन गर्ने योजनाका साथ सन् २०११ मा अब्दुल हाफिज ट्रेडिङ एन्ड कन्ट्र्या्क्टिङ कम्पनी स्थापना गरे । साथै उनले किङ कुल यूएस ब्रान्डमार्फत कुलर सिस्टम बिक्री गर्न थाले।
पहिलो ब्रान्डको कुलर बजारमा आएपछि त्यसले अब्दुल निकै उत्साहित भए। बजारमा उनको उत्पादन निकै रुचाइयो। त्यसपछि उनी एयर कन्डिसनलगायत इलेक्ट्रिक सामान ल्याउने योजनामा लागे।
अब्दुलको घर जनकपुरको बेला भन्ने गाउँमा रहेको छ। उनले आफ्नो गाउँको नामबाट नै बेलाको भन्ने ब्रान्ड स्थापना गरे र त्यही ब्रान्डलाई प्रख्यात गराए।
किङ कुल यूएस ब्रान्डमार्फत कुलर सिस्टम बिक्री गरेको र बेलाको ब्राण्ड मार्फत एयर कन्डिसनलगायत इलेक्ट्रिक सामान बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए। उनले आफूहरु तीन दाजुभाई (अब्दुल कादिर, अब्दुल वासिद र अब्दुल हफिज) मिलेर यो व्यवसाय संचालन गरेको बताए।
आफू जन्मेको ठाउँलाई ब्रान्ड बनाएर अगाडि बढ्दा आफ्नो पहिचान र शान बढ्ने उनी बताउँछन्। अहिले उनको यो व्यवसाय कतारबाट शुरु गरेर बेलायतमा पनि बिस्तार भएको छ। निकट भविष्यमा अन्य देशमा पनि फैलाउने योजना रहेको उनले बताए।
वासिदले नेपालमा व्यवसायको लागि बजार प्रशस्त रहेको तर लगानीका लागि नीतिगत समस्या रहेको गुनासो पनि गरे। नेपालमा ठूला व्यवसायमा लगानी गर्दा सरकारी निकायबाट नै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। यदि कोही नेपाली अथवा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा यसका लागी सरकारले सुरक्षित र सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले यदि नेपाल सरकारले लगानीमा सुरक्षीत र सहज वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा आफूँहरु नेपाल फर्कने बताए।
कतारका अधिकांश रेष्टु्ररेन्टमा आफ्नो उत्पादन प्रयोगमा रहेको र कतारमा संचालन हुने विश्वकप फुटबललाई लक्षित गरेर आफ्ना उत्पादन बढाउने योजना रहेको उनले बताए।
केही समय पहिले उनले संचालन गरेको बेलाको ब्राण्डको निरिक्षण गर्न बेलायती मेयर माजित खान पनि पुगेका थिए। युकेको हेक्स्थोरपे डोनक्यास्ट सहरको चेरी ट्री रोडको युनिट–४ सञ्चालनमा आएको बेलाको निरीक्षणका क्रममा मेयर माजितले पहिलो नेपाली व्यवसायी जसले बेलायतमा आफ्नै ब्रन्ड भित्र्याएको भनेर प्रशंसा गरेको अब्दुलले सुनाए।
कतारमा भएको प्रदरशनीमा पनि हजारौं अन्तराष्ट्रिय अवलोकनकर्ताको रोजाइमा बेलाको ब्रान्ड रहेको उनी सुनाउँछन्।